Kooxdii Ugu Fiicneyd Horyaalka Premier League Isbuucaan Oo La Soo Saaray. - Wargane News
Home Sports Kooxdii Ugu Fiicneyd Horyaalka Premier League Isbuucaan Oo La Soo Saaray.
Chelsea ayaa weli shan dhibcood oo nadiif ah ku heysa hogaanka Premier League ka dib markii ay barbaro 1-1 ah Stamford Bridge kula galeen kooxda ku soo xigta ee Manchester City.
Seddex dhibcood ayaana kala saartay afarta koox eek a danbeysa City, iyadoo Manchester United, Arsenal iyo Tottenham ay dhamaantood badiyeen. Southampton ayaa ah kooxda kaliya ee guuldareysatay lixda kooxood ee ugu sareysa horyaalka.
Liverpool iyo Everton waxa ay isku sii kululeeyeen kulanka Merseyside derby eek a dhacaya Goodison Park 7da bishaan iyagoo wada badiyay kulamadii isbuucaan.
Dhanka hoose, kooxda Leicester City ayaa seddex dhibcood u jirta booska badbaada iyagoo ugu hooseysa horyaalka ka dib guuldarro 3-1 oo ka soo gaartay Man United, kooxaha kale ee iyagana dhibaatada ku jira QPR, Hull City, Burnley, Aston Villa iyo West Brom waa laga badiyay dhamaantood.
11kii ciyaaryahan ee isbuucaan ugu fiicnaa horyaalka Premier League waxaa soo xulay Garth Crooks oo ku daabacay website-ka BBC Sport.
Dhanka goolka waxaa jira goolhayaha Tottenham Hugo Lloris kaasoo muhim u ahaa guushii 3-0 ee ay kooxdiisa ka gaartay West Brom, isagoo sameeyay labo baadbaadin oo wax weyn ka bedeshay ciyaarta markii uu fursado goolal loo fishay ka beeniyay James Morrison iyo Claudio Yacob.
Daafaca Arsenal Hector Bellerin ayaa ku sii joogsaday Aston Villa oo dhaawac dhulka markii horeba la tiilay, 498 daqiiqadood uu ciyaaray Premier League, waxa uu helay hal darbo oo goolka ku bartilmaameedsan waxaana ay noqotay gool uu ka dhaliyay Aston Villa kulankii ay kooxda Arsenal 5-0 ku badisay.
Daafaca dhexe ee Chelsea Kurt Zouma ayaa ka yaabsaday cid walba isagoo la ciyaar siiyay labo kulan oo waa weyn oo isku xigta kulankii League Cup ee Liverpool iyo kulankii Manchester City ee Premier League, waxaana uu ku guuleystay 10 ka mid ah 11 kubadood oo uu ka difaacanayay weeraryahano, iyadoo ay keentay in lagu tilmaamo Marcel Desailly.
Daafaca dhexe ee Newcastle Fabricio Coloccini ayaa bixiyay 12 kubadood oo halis ahaa kulankii Hull City, waxaana uu ka caawiyay Newcastle inay shabaqa ilaashadaan horyaalka markii ugu horeysay tan iyo bishii November.
Daafaca garabka bidix ee Tottenham ayaa xilli ciyaareedkan sameeyay shaaftooyin (taakal) lagu guuleystay xilli ciyaareedkan waxaana uu amaan weyn ku muuteystay inuu kubad xariiqda goosha ka badbaadiyo isagoo cadaadis kala kulmaya Brown Ideye kulankii ay Tottenham ka badisay West Brom.
Daley Blind ayaa ugu danbeyn bilaabaya inuu door hogaamineed ka helo Manchester United oo uusan in badan ahaanin aktar ku xigeenka Wayne Rooney iyo Angel di Maria, waxa uu ismuujiyay kulankii ay ka badiyeen Leicester City isagoo caawiye ka noqday gool markii ugu horeysay Premier League.
Lix ka mid ah goolasha sagaalka ah ee uu Christain Eriksen ka dhaliyay Premier League xilli ciyaareedkan waxa uu ku dhaliyay meel ka baxsan garoonkooda, waxaana uu ka caawiyay kooxdiisa isbuucaan inay burburiso Wesy Brom, isagoo lagu abaalmariyay qandaraas shan sanno ah shalayto.
Mesut Ozil ayaa ka qeyb qaatay afar goo loo horyaalka ah oo ay dhalisay Arsenal xilli ciyaareedkan dhamaantoodna waxa ay ahaayeen kuwa laga dhaliyay Aston Villa, waxa uu isbuucana hormuud ka ahaa xasuuqii loo geystay kooxda Aston Villa iyadoo Arsenal ay 5-0 ku badisay.
Raheem Sterling ayaa weli halbowle u ah Liverpool inkastoo uu u soo laabtay Stamford Bridge waxaana uu dhaliyay isbuucaan goolkiisii ugu horeysay ee Premier League ee Anfield ee tan iyo isbuucii furitaanka ee xilli ciyaareedka.
Xiddiga Stoke City Jonathan Walters ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Premier League ee dhaliya seddexleydii ugu dhamesytirneyd, isagoo ku dhaliyay cagta bidix iyo cagta midig iyo madaxa,tan iyo 19kii May 2013, waxaana uu seddexleyda ka dhaliyay kulankii ay Stoke ka badisay QPR.
Tan iyo markii uu Jermaine Defoe ku soo biiray Sunderland waxa ay sarre u qaaday rajadii kooxda iyo taageerayaasha, 32 jirkaan ayaa dhaliyay goolkii labaad ee kooxdiisa kulankii ay ka badiyeen Burnley, waana goolkiisii ugu horeysay ee kooxda tan iyo markii uu kaga soo biiray Toronto.